WP All Import: Ahoana ny fomba fanafarana betsaka ny taksonomie sokajy ho ao amin'ny WordPress avy amin'ny CSV | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 15, 2021 Alatsinainy, Novambra 15, 2021 Douglas Karr
Ny orinasako dia miasa amin'ny lehibe be WordPress fampidirana sy fampiharana, tsy maintsy mifindra angona an-taonina avy amin'ny tranga taloha na rafitra fitantanana votoaty hafa (CMS) tanteraka. Matetika, tafiditra ao anatin'izany ny fanafarana vokatra ho an'ny WooCommerce, manampy toerana amin'ny karazana lahatsoratra mahazatra, na manangana taxonomy miaraka amin'ny fampidirana fantatra. Raha tianao, ohatra, ny manampy sokajy amin'ny firenena, fanjakana, na faritany… dia afaka miasa amin'ny WordPress mandritra ny ora maro ianao amin'ny fampidirana angon-drakitra. Soa ihany fa misy plugin WordPress mahagaga izay manara-maso an'ity dingana ity amin'ny alàlan'ny ahafahanao manafatra sanda misaraka amin'ny comma (CSV) rakitra ho an'ny singa rehetra ao anatin'ny WordPress.
On Martech Zone, nanitatra ny anay izahay fanafohezan-teny pejy mankany amin'ny toerana tsy azo fehezina. Lisitra lehibe ho an'ny fanafohezan'ny teknolojia momba ny varotra sy ny varotra, ny fanafohezan-dry zareo ary ny famaritana azy. Tena miadana ny fampandehanana ny pejy satria lehibe loatra ary tsy voamarika tsara amin'ny HTML ho an'ny fikarohana organika. Noho izany, manao fampivoarana ao amin'ny tranokala aho mba hananganana karazana lahatsoratra manokana sy ny taxonomy vokatr'izany mba ahafahako manatsara ny hafainganam-pandeha, ny fahafahana manivana ny lisitra, ary ny filaharana ankapobeny.
Hanombohana, tiako homena sokajy alfanumerika ho an'ny fanafohezan-teny tsirairay, manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 9 ary ny A ka hatramin'ny Z. Mety haka fotoana kely ny fampidirana ireo, noho izany dia nanangana rakitra CSV aho miaraka amin'ny anarana sokajy, slug ary famaritana:
Ahoana ny fanafarana ny sokajy CSV ahy
Amin'ny fampidirana ny WP ny Import plugin, afaka mandeha mora foana amin'ny mpamosavy aho mba hampakatra ny CSV, sarintany ny sahako, manangana ny famantarana tokana, manamboatra saha fanampiny ary manafatra ireo sokajy.
Ankehitriny, afaka miverina amin'ny taxonomy mahazatra natsanganako tao amin'ny WordPress aho (nantsoiko hoe Alphabet) ary hitanao fa ny sokajy rehetra dia nomena anarana araka ny tokony ho izy, ny slugs ampiharina ary ny famaritana dia feno mponina. Ary, raha tokony handany adiny iray amin'ilay dingana, dia minitra vitsy monja!
Fanamarihana: Mbola eo an-dalam-pandrosoana ny vahaolana acronmy-ko ka tsy ho hitanao raha tsindrio anio. Tandremo anefa tsy ho ela!
Tena talanjona aho tamin'ny WP All Import ka nampiako azy tamin'ny anay Plugins WordPress tsara indrindra lisitra. Nividy fahazoan-dàlana feno ho an'ny orinasako ihany koa aho, izay manome fahafahana maro kokoa, ao anatin'izany:
Mampiasà rakitra XML, CSV, na Excel
Manafatra na manondrana angona avy amin'ny singa rehetra ao amin'ny WordPress na WooCommerce, anisan'izany ny mpampiasa
Manohana rakitra tena lehibe, ary izay firafitry ny rakitra
Mifanaraka amin'ny plugin manokana sy saha lohahevitra
Sary, sokajy, WooCommerce, Advanced Custom Fields, Custom Post Type UI, sns.
Fifandraisana tsotra sy API mora azo
Safidy fandrindrana mahery vaika
Andramo ny WP All Import's Sandbox Environment WP All Import Plugin
Fampahafantarana: Tsy mpiara-miasa amin'ny WP All Import aho, fa mampiasa ny rohy mifandraika amin'ny WordPress sy WooCommerce amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fanafohezan-tenysaha manokana mandrosoCSVcsv importfanondrananampampiasa fanondrananafanondranana wordpresssokajy fanafaranaimport csvmanafatra mpampiasamanafatra sokajy wordpresswoocommerceWordPresswp import daholoXML